Awudingi uhlelo lokusebenza ukusebenzisa i-Omegle kufoni noma kuthebhulethi yakho!Iwebhusayithi isebenza kahle kuselula.
Hlangana nabantu ongabazi ngezintshisekelo zakho!
I- Omegle(oh meg ull)iyindlela enhle yokuhlangana nabangane abasha, noma uzilolongela ukuqhelelana nomphakathi.Uma usebenzisa i-Omegle, ubhangqwe ngokungahleliwe nomunye umuntu ukuze nikhulume ubuso nobuso.Uma uthanda, ungangeza izintshisekelo zakho futhi uzobhangqwa ngokungahleliwe nomuntu okhethe okunye okuthakaselayo okufanayo.
Ukukusiza ukuthi uhlale uphephile, izingxoxo aziziwa ngaphandle kwalapho utshela othile ukuthi ungubani (akunconyiwe!), futhi ungamisa ingxoxo noma nini.Bona Imigomo Yesevisi yethu kanye Nezinkombandlela Zomphakathi ukuze uthole ulwazi olwengeziwe mayelana nokufanele ukwenze nokungafanele usebenzise i-Omegle.Ingxoxo yevidiyo ye-Omegle ilinganiselwe kodwa akukho ukulinganisela okuhle.Abasebenzisi banesibopho sokuziphatha kwabo kuphela ngenkathi besebenzisa i-Omegle.
Kumelwe ube neminyaka engu-18+ noma 13+ ngemvume yabazali nokugadwa ukuze usebenzise i-Omegle.Bona Imigomo Yesevisi ye-Omegle ukuze uthole ulwazi olwengeziwe.Izivikelo zokulawula zabazali ezingasiza abazali zitholakalele ukuthengisa futhi ungathola ulwazi olwengeziwe kokuthi https://www.connectsafely.org/controls/ kanye namanye amasayithi.
Sicela ushiye i-Omegle futhi uvakashele isayithi labadala uma kuyilokho okufunayo, futhi uneminyaka engu-18 noma ngaphezulu.
Ngokubambisana, sizophumelela.Vikela Ukuxhumana Nomaphi Lapho Ukhona
Siyajabula ukukusiza ukuthi uhlale uxhumene, ukhulume futhi uveze imibono yakho ukuze nizuze okwengeziwe ngokubambisana.Siyaziqhenya ngokwethenjwa izigidi zamabhizinisi, amabhizinisi amancane kanye nabantu abafana nawe.
Yakha ubudlelwano obuqinile bebhizinisi, uqinise ukubambisana, futhi usingathe izinkomfa ezibandakanyayo ngevidiyo ye-HD nomsindo wabahlanganyeli abangafika kwabayi-1,000.
Shintsha amagumbi okuhlangana ukuze ahlangabezane nezidingo ezishintshayo zabasebenzi kanye nehhovisi elibhalansisa nokugeleza komsebenzi okukude ngevidiyo ye-HD nomsindo, ukwabelana ngokuqukethwe okungenantambo, namabhodi emiyalezo asebenzisanayo.
Thuthukisa izwi lakho ngesixazululo sethu socingo lwefu lamazwe ngamazwe ngomzila wezingcingo ovikelekile, imigqa yamakholi, i-SMS, ukubiza ukuya enkomfeni, nokuningi.
Thatha ithuba lokusebenza kwehhovisi ekhaya - inkomfa ngevidiyo, izingcingo, amabhodi emiyalezo namazwana kudivayisi yakho yokusebenzisana yomuntu siqu.
Isixazululo sengxoxo sifakwe ne-akhawunti futhi senza ukugeleza komsebenzi kube lula, sithuthukisa ukukhiqiza, futhi siqinisekise ukubambisana okuphephile phakathi kwabasebenzi ngaphakathi nangaphandle kwenhlangano.
Thuthukisa futhi wenze lula okuhlangenwe nakho kwakho kwe-Zoom ngezinhlelo zokusebenza ezingaphezu kuka-1,000 nokuhlanganiswa kokushejula, ukubambisana, ukufunda, ukuloba, i-CRM, nokuningi.
I-Zoom inikezela ngama-Webinars Wevidiyo kanye nemikhiqizo yakamuva ye-Zoom Events ukuze ihlangabezane nazo zonke izidingo zakho zomcimbi we-virtual.Dala ukuzizwisa okubonwa yiwo wonke umuntu.Qalisa namuhla nge-Zoom Events nama-Webinars wevidiyo.
Sebenzisa ama-API ethu, ama-SDK, ama-webhooks, nokuningi ukuze wakhe izinhlelo zokusebenza ezinothile, ukuhlanganiswa komuntu siqu, kanye nokusebenza okusha okuhambisana nokugeleza komsebenzi okukhona kwesevisi ye-Zoom.
Izinqubo eziku-inthanethi ezisingathwe yiseva ezingenza imali kalula futhi zikalwe kuzithameli ezintsha.
Uhlelo lokusebenza lwengxoxo yevidiyo olungahleliwe
Uyemukelwa ku-ChatSpin, uhlelo lokusebenza lokuxoxa ngevidiyo olungahleliwe elenza kube lula ukuhlangana nabantu abasha ku-inthanethi.I-ChatSpin inikeza izici zengxoxo yevidiyo ezihlanganisa imaski yobuso, izihlungi zobulili nezwe, ingxoxo yangasese, nokuningi.Xoxa nabantu abangahleliwe emhlabeni wonke ngaso leso sikhathi.Zenzele abangani abasha, thola idethi, bukisa ngamakhono akho, cela iseluleko, khuluma ngepolitiki, noma jabulela nje ingxoxo yevidiyo ethule nomuntu obungeke uhlangane naye ngenye indlela.Kumahhala futhi kulula ukuqala ukuxoxa ngevidiyo nokuzijabulisa.Ngeke wazi ukuthi ubani ozohlangana naye ngokulandelayo!
Uma ubheka ukuxhumana nabantu abasha, ingxoxo yevidiyo engahleliwe iyindlela okufanele uhambe ngayo, futhi i-ChatSpin iyimoto ezokuyisa lapho.Senze kahle uhlelo lwethu lokusebenza ukuze uthole okufunayo—indlela yokuxhumana nabantu abasha.
Ngakho usalindeni?Xoxa nabantu okungahleliwe manje!
Izici ze-Cam Chat zamahhala
Siqale i-Chatspin ngenhloso—ukwenza kube lula ukuqala ingxoxo engahleliwe nabantu esingabazi.
Bamba kancane.Akuyona indaba egcwele leyo.
Umhlaba obumbene kakhudlwana, umhlaba lapho ungenza khona ukuxhumana kwangempela nabanye abantu, basekhaya nabasemazweni angaphandle, yikho okuqhube ithimba lethu ukuthi lidale uhlelo lwethu lokusebenza lwevidiyo.Ikholi ngayinye iletha umhlaba eduze, isisiza ukuthi sithole izindlebe zokulalela, futhi isinika isikhala sokuhlola imibono sodwa.
I-Chatspin yenza kube lula kuwe ukuthi uxoxe nabantu abangahleliwe abakulungele.Valelisa ukuthi ungahlangani nabantu abalungile.Uhlelo lokusebenza lwengxoxo yevidiyo engahleliwe lwe-Chatspin luyingosi yakho ukuze uzizwe uxhumeke ngokunenjongo kwabanye, eduze nakude.
Ubuso Nobuso, isici sengxoxo yevidiyo sika-Tinder sokungena, manje sesisakazwa emhlabeni wonke
I-Tinder, njengamanje uhlelo lokusebenza olukhulu kakhulu emhlabeni lokuthandana ukuze abantu bathole okufanayo futhi baxhumane nabo, inweba esinye isici namuhla ukuze sandise isikhathi abantu abasichitha kuhlelo lokusebenza, kanye nokuxhumana abangaba nakho ngaphakathi kwalo.
Ubuso Nobuso, isici sokungena kuphela esasungulwa yi-Tinder ekuqaleni konyaka esivumela abasebenzisi ukuthi baxoxe ngevidiyo ngaphandle kokushintshisana ngolwazi lomuntu siqu futhi kuphela lapho bebhekene nekhamera, manje sanda emhlabeni wonke, mhlawumbe umnyakazo ofika ngesikhathi isikhathi lapho abantu abaningi bengahlangani khona mathupha.
I-Tinder izazi kahle izici ezithusayo zezinsizakalo zokuqomisana, ngakho-ke iveze ukuthi akulona iqembu levidiyo lenkampani kodwa ithimba layo le-Trust and Safety elakhe leli.
“Siyajabula ukwabelana ngokuthi isici sethu Sobuso Nobuso sisakazwa emphakathini wethu womhlaba wonke ngemva kokuthola impendulo eyakhayo evela kumalungu ethu afinyelele kuso kusenesikhathi,” kusho u-Rory Kozoll, oyiNhloko ye-Trust and Safety Product kwa-Tinder.“Lokhu kungeza ohlwini lwethu olukhulayo lwezici ezakhelwe ukugxila ekuphepheni kwamalungu kulo lonke uhambo lwabo lokuthandana, njengokuqinisekiswa kwesithombe, Isikhungo Sokuphepha kanye nobuchwepheshe bethu bokuthola imilayezo ecasulayo.”
Izinhlelo zokusebenza zokuphola zingase zibukeke njengesigaba esingavamile ukuphumelela esikhathini lapho abaningi begxile khona - ngenxa yemithetho kahulumeni, noma izincomo ezivela kochwepheshe bezempilo, noma kokubili - ekuqheleni komphakathi nokuhlangana ngamabhamuza amancane, awaziwayo, avamile.
Kodwa empeleni kubonakala sengathi likhona ithuba lapha: ziba yindlela yokuthi abantu baxhumane futhi bathole ukuhlangana, ngesikhathi lapho amabha amaningi nezinye izindawo zemihlangano yendabuko zivalwa, noma okungenani ukuthola imisebenzi yabo evamile ilinganiselwe kakhulu. , futhi abantu bazobonana kancane mathupha ngazo zonke izizathu ongase uzicabange.
Njengesibonelo, i-Tinder, ngokwezibalo ze-AppAnnie, iqhubekile nokuhlala ezikhundleni eziphezulu zokulandwa kwezinhlelo zokusebenza zendlela yokuphila kulo nyaka (okwamanje isendaweni yesithathu ku-iOS e-US).
Futhi isici sengxoxo yevidiyo sigqamisa umqondo wokusebenzisa uhlelo lokusebenza hhayi nje ukubona ukuthi ubani okhona nokuthi ubani ongamatanisa naye, kodwa ukuxhumana nalabo bantu.
Okunye okuhlanganisa lapha ukuthi akusona i-spamfest yamahhala yabo bonke abantu abangafuneki abasondela kuwe, njengoba bengenza endaweni yokucima ukoma.
I-Tinder iphawula ukuthi bobabili abathintekayo badinga ukungena esicini, futhi kufanele ukuthi ufane nengxenye evamile yohlelo lokusebenza ngaphambi kokuthi kuqaliswe ingxoxo.
Futhi nalapho ungakhetha ukuziba izingxoxo zevidiyo uma zingena, njengoba ungase ushaye ucingo oluvamile.
Futhi, uma uthola abantu abasabisayo besho izinto ezingalungile kuwe futhi bekubiza kakhulu, futhi ungafuni ukushintsha isici ngokuphelele, ungabika abantu ngokuskrola kuphrofayela yabo bese ulandela imiyalelo "yombiko".
I-Tinder ibilokhu idlala ngezici zevidiyo iminyaka ukuze inwebe izindlela abantu abahlanganyela ngazo kuhlelo lokusebenza, ividiyo ingenye yezindlela ezidume kakhulu nezihehayo ezinhlelweni zokusebenza njengamanje.
Kube yinqwaba yemiphumela.I-Tinder Loops, enye indlela yokuziveza, ibikhona kusukela ngo-2022 futhi isathuthuka.Eminye imizamo efana ne-Swipe Night apocalyptic interactive video show yangaphakathi nohlelo iye yagcinwa ngoMashi ngenxa ye-Covid-19, nakuba muva nje kubukeka sengathi uhlelo luyavuselelwa kwezinye izimakethe.
I-Callpy izokuvumela ukuthi ubone ukuthi kungenzeka yiniukuxhumana nezivakashi kusayithi lakho.
Lokhu kuzoqinisekisa ukukhula kokuthengisa, kuthuthukisekakhulu ukuguqulwa kwesayithi, futhi kwandiseukuvakashelwa okuphindaphindiwe okuvela kubavakashi.
Izinsuku ezingu-19 zezingcingo zamahhala
Thola idemo yezinsuku eziyi-19
Thola oxhumana nabobezivakashi emithonjeni evulekile!
Xhumanisa ekhasinilenkundla yezokuxhumanaamanethiwekhi
Amakhasi ewebhusayithi avakashelwe
Idatha eshiywa ngumsebenzisi ingalayishwa ku-CRMfuthi ilayishwe njengefayela
Ukuqoqwa kwedatha yesivakashi kwenziwa kungakhathaliseki ukuthi ukhona umxhumanisi.Oxhumana nabo bazongena ku-CRM (AMO noma i-Megaplan) ngokushesha ngaphandle kokuhlanganyela kwakho.
ukuhlanganiswa ne-crm ethandwayo
Engeza amaklayenti amasha nemisebenzi ku-CRM ngenqubo yengxoxo
ingxoxo yamahhala nezivakashi ngaphandle komkhawulo wokusebenza
Ingxoxo yamahhala ingunaphakade
Awukho umkhawulo wokusebenza, awukho umkhawulo wesikhathi
Singcono kunezimbangi zethu
Ingxoxo yamahhala esebenzayo
27 imisebenzi mahhala
27 amathuluzi okulawula izinga lesevisi
Sinikeza izipho zokudlulisela abangani
Kusukela ku-215 ₽ endaweni yokusebenza yomxhumanisi ngenyanga
3 imigudu eyengeziwe yokuxhumana
Ingxoxo, umsindo, ividiyo, ukuqapha umsebenzi
Lawula ukubhala ngaphezulu, ukuxhumana okulalelwayo/kwevidiyo
Izinsuku eziyi-19 zokukhula kokuthengisa, imisebenzi engama-20
UKUGUQULELA KANYE NOKUBA LULE KWEMISEBENZI NAMATHULUSI
Indlela yendabukoyokwelulekwa ku-inthanethi
Izingcingo zamahhala eziku-inthanethiezivela kubavakashi
Yenzaukubonisana kwamavidiyo abukhoma kusayithi
Humusha isivakashingamakhasi, uboniseokuqukethwe
Gada umsebenzi wezivakashingesikhathisangempela
Gqamisa futhi uchazeizinto ekhasinilesivakashi
I-Callpy izonikeza ngokuzenzakalelayousizokusivakashi esinesithukuthezi
Ukwenza ngendlela oyifisayo okujulile kwesitayelasewijethi esinezicizobunikazi benkampani
Gcina ngokuzenzakalelayooxhumana nabo bekhasimende ku-CRM
Ukuqoqwa koxhumana nabo bezivakashizesayithingefomu le-Callpy
Dala amaqembu abelulekiSabalalisaukugeleza kwezivakashi kubo
Joyina ingxoxo yevidiyo yase-Russian edume kakhulu yokuqomisana, ukuzijabulisa noma ube nesikhathi esimnandi sokuxhumana nabangane abasha nabangane bakudala kunethiwekhi. Nsuku zonke IWebhu Yomhlaba Wonke ithola ukuduma futhi inikeza izindlela ezintsha nezithokozisayo zokuxhumana nge-inthanethi emhlabeni wonke, ngosizo lwengxoxo yevidiyo nezinye izinsiza zewebhu kalula futhi kalula ukujwayelana nabantu abathokozisayo, hhayi nje ukuxhumana. Ingxoxo yevidiyo yokuqala yokuxhumana nokuqomisana nekhamera yewebhu ye-chatroulette-worldwide.com yokuxhumana emhlabeni jikelele ku-inthanethi. Njengoba izibalo ziyanda abantu abasha (abesifazane nabesilisa) bathola uhhafu wabo ngevidiyo yokuqomisana engxoxweni yevidiyo ngaphandle kokushiya igumbi! Impumelelo yensiza.
Imfihlo yempumelelo chat-ruletka.net elula, sibonga izinhlangothi web cam ngaphandle ukuxhumana bayakwazi ukuhlola nomunye zibukeke ngoba lokhu kubalulekile ukuhlola ingxenye yesibili. I-Chat ithole ukuthandwa okuningi ngenxa yokuthi kungenzeka ukuthola abangani ngendlela engahleliwe ukuthi udlalwa kanjani ibhodlela, kusuka kuphi, futhi uthole lonke igama elijwayelekile le-roulette yengxoxo. Amathiphu namasu Yiba qotho ngokwakho ngoba lapho uhlangana empilweni yangempela nabangane abasha xoxa ngevidiyo wonke umuntu obuzwayo ufuna ukubona abantu bangempela esikhundleni sezinhlamvu eziqanjiwe engxoxweni yevidiyo. Khuluma, thola abangani, abangani bakudala, zama ukubamba inkhulumomphendvulwano nomuntu esimweni esimnandi, gwema inhlamba, gcina ingxoxo ithakazelisa futhi ijabulise - kuyisihluthulelo sokuphola ngempumelelo! Yenza izincomo, unikeze izipho! njengasempilweni yangempela,izipho zinikezwa ukuqonda caller ukuthi ukunakwa ozinikele futhi ivelele ngokumelene nawe phakathi abangane nabangane. Imithetho yengxoxo yevidiyo ye-russian i-coomeet memeet inikeza ingxoxo yesevisi ngendlela eyakhayo. Izingxoxo zengxoxo iningi labasebenzisi abakhuluma isiRashiya.
Kwenqatshelwe ngokuqinile hhayi ngokuziphatha, hhayi ukuveza umbhalo nganoma iyiphi indlela.Leyo ngxoxo ngesihloko socansi nezingane ezineminyaka engu-18.Akuvunyelwe ukukhombisa izitho zangasese ezivezwe ngokuphoqelekile.ukuphepha Ngengxoxo yevidiyo evikelekile yehlisa inani labantu abangenanembeza Isinqumo ngokubhaliswa okulula okungeke kube nzima kodwa kuzosiza isihlungi sengxoxo futhi sivimbele abangenayo.
Amasayithi Okuxoxa Ahamba Phambili afana ne-omegle ngo-2022 - Ezinye Zengxoxo Zengxoxo Yamahhala Yevidiyo
Sisebenzisa i-inthanethi emisebenzini eminingi eyahlukene, kodwa esinye sezizathu eziyinhloko ukuba nomphakathi.Isidingo sokusebenzelana siyisimo somuntu esiletha induduzo nokwaneliseka kubantu abaningi abavamile.Yingakho i-Facebook idume kakhulu.
Kodwa kunezinye izingosi eziningi lapho abantu bengahlangana khona.Eziningi zalezi zibizwa ngokuthi izinkundla noma amabhodi emiyalezo lapho abantu befaka khona imibono bese bebuya ngokuhamba kwesikhathi ukuze babone ukuthi akekho yini ophendulile.Nokho, kukhona amasayithi amaningi asiza ukwabelana ngesikhathi sangempela aseduze nezingxoxo zomuntu siqu njengoba ungakwazi ukuxhuma ku-inthanethi.
Enye yezingosi ezidume kakhulu ibizwa nge-Omegle, lapho amalungu ahlanganyela khona ngevidiyo, umsindo, noma umbhalo nje.Yindawo enhle yokuhlangana nabantu abangahleliwe futhi uqale ingxoxo nomuntu ongamazi ngokuphelele.Kepha njengeziza eziningi ezinkulu, i-Omegle isigcwele abantu abaningi.
Ngezansi uzothola izingosi zezingxoxo ezibukhoma njenge-Omegle lapho ungaxhumana khona nabangane abasha.
1. I-Chatliv:I-Chatliv - Indlela eshesha kakhulu futhi elula kakhulu yokwenza ingxoxo yekhamera yewebhu nomuntu ongamazi osuka noma yikuphi emhlabeni.Odinga ukukwenza nje ukufaka ubulili bomuntu, lapho isevisi izokhetha khona manjalo umuntu ongamazi ofaneleka kakhulu futhi ofuna ukuhlangana nomuntu onjengawe.
I-Chatliv iyindawo ehamba phambili yokuxoxa ngevidiyo futhi ingenye yezindawo zokuxoxa ngevidiyo ezaziwa kakhulu.Izinkulungwane zezingxoxo zihlala ziku-inthanethi kusuka kuwo wonke umhlaba ezingosini zezingxoxo eziku-inthanethi.
2. I-CooMeet:I-Coomeet iyisayithi lengxoxo yevidiyo nolimi lwesiRashiya (roulette).enye yezinketho ezinhle kakhulu ze-chatroulette ne-omegle, ku-coomeet ungaqala ividiyo yokuqomisana nabantu ongabazi abangahleliwe abavela kuwo wonke umhlaba.U-Coomeet usebenza ngomgomo we-roulette, okusho ukuthi ngeke wazi ukuthi uzoxoxa nobani.uma unesizungu ke lezi zinhlobo zezingxoxo zingakulethela injabulo.
Izici ze-Coomeet:1. Njalo xhumana nomuntu ongamazi2. Ingxoxo yevidiyo yamahhala3. Faka abantu ongabazi ohlwini lwabangane bakho4. Hlala uthintana nomuntu ongamazi omthandayo5. Thumela izipho nerose kothandekayo wakho6. Thola abangane best
3. I-TinyChat:Namuhla, i-TinyChat iyisevisi yengxoxo yezwi nevidiyo enkulu kunazo zonke ku-inthanethi.Inkampani izishaya isifuba ngokuthi abasebenzisi bakhiqiza imizuzu eyizigidi ezi-5 ye-airtime ngosuku.Lapho uzothola izinkulungwane zezingxoxo, ngisho ezinye zazo ezaqalwa abantu endaweni yangakini, futhi uma ungayitholi itimu oyifunayo, ungazakhela eyakho.
I-TinyChat ivumela ukusakazwa kwevidiyo okungafika kwangu-12 ngekamelo ngalinye futhi isebenzisa i-API lapho abasebenzisi bengasakaza khona amavidiyo bukhoma besuka ezinhlelweni ezisingathwa insiza futhi akusizi ngalutho.Abantu bayahlangana ukuze baxhumane ngombhobho, ividiyo noma imiyalezo esheshayo.
4. Ikhamera yewebhuye-Omegle: Ikhamera yewebhu ye-Omegle iyikhamera yewebhu ethandwa kakhulu yokuqomisana nokuxoxa. Bangaphezu kuka-20.000.000 abasebenzisi ababhalisiwe. Izingxoxo zamahhala ze-Roulette. amasayithi afana ne-omegle.I-Omegle Webcam iyindlela yamahhala yengxoxo yevidiyo engahleliwe ye-Omegle, khuluma ngokungaziwa nabantu ongabazi usebenzisa ikhamera yewebhu futhi uhlangane nabantu abasha ngaso leso sikhathi. Xoxa ngevidiyo nabasebenzisi abangahleliwe, thola abangani abasha. Yiba nokuxhumana komphakathi nabathandi be-omegle.I-Omegle.webcam iwuhlobo lwesayithi yengxoxo.
5. I-Bazoocam:I-Bazoocam enye ingosi yezingxoxo yewebhu engajwayelekile enwetshwe kakhulu ukuyigcina ihlanzekile.Njengamanye amasayithi okukhulunywe ngawo, ufike ngephutha komunye umuntu.Uma ungakuthandi okubonayo, bese ucindezela inkinobho ethi "yeqa" bese udlulela komunye umuntu.
I-Bazoocam inikeza imidlalo yabadlali abaningi abambalwa ongayijoyina njengama-icebreaker noma uma unesizungu ukhuluma ngawe.Uma ubhorekile, bathembisa ukwenza okuthile okungavamile, kodwa bakuxwayise ngokugcina izingubo zakho uzigqokile.Zama ukugqoka isudi noma ukudlala umculo owuthandayo.Heck, dlala isiginci noma i-kazoo futhi uzothola abantu abaningi ongakhuluma nabo.
6. I-FaceFlow:I-FaceFlow - Laba bafana bayisa inkundla yezokuxhumana ezingeni elilandelayo ngokuvumela abasebenzisi ukuthi babe nezingxoxo zevidiyo ezingamukela abantu abangafika kwabathathu ngesikhathi.I-FaceFlow ikunikeza "ingxoxo yevidiyo yamahhala kanye nezinkomfa zevidiyo nabangane, khona kanye esipheqululini sakho sewebhu," kodwa futhi ungakhuluma nabantu ongabazi.Abasebenzisi manje bangakha iphrofayela eseshekayo futhi bangabelana ngezithombe namavidiyo abawathandayo ku-YouTube.
Ngaphandle nje kokuba enye insizakalo yengxoxo yewebhu, le sayithi ihambisana kakhulu nezinsizakalo ezinhle ezinikezwa yiSkype.Inikeza umbhalo kanye nezingxoxo zevidiyo zesikhathi esisodwa.Futhi ukwenza izinto zihehe kakhulu, i-FaceFlow ikhiphe umdlalo wabadlali abaningi obizwa nge-Flappy obukeka unzima kakhulu.
7. I-ChatRandom:I-Chatrandom inemigomo emikhulu, enye yazo ukuba igama elifanayo ne-Facebook, Twitter noma i-YouTube.Lena enye isayithi yekhamera yewebhu exhumanisa umsebenzisi nomunye umsebenzisi ongahleliwe.Kubonakale njengenye indlela ye-Chatroulette ngoba isiza sashintsha imithetho kaningi.
Ukufeza lo mgomo, bahlanganisa ndawonye abantu abavela kuwo wonke umhlaba futhi bengeza njalo amazwe amasha nezilimi.Ungakhetha ukuhlanganyela ngokungahleliwe nomunye umuntu oyedwa, neqembu, noma namantombazane.Ungaphinda ukhethe okuncamelayo ukukhuluma ngevidiyo, nabasebenzisi abayizitabane, noma ngolimi oluthile.Baphinde bangeze ikhamera yewebhu eyengeziwe nezinye izinsiza ukuhlangabezana nokulindelwe ngabasebenzisi.
8. I-Chatroulette:I-Chatroulette iyisevisi yengxoxo esekelwe kukhamera yewebhu enendlela eyingqayizivele yokuxhuma abasebenzisi nabantu abangabazi abangahleliwe.Kufanele kufane nokudlala i-roulette yesiRashiya, esikhundleni sokuqhudelana ngesibhamu, ukhulume ngomlomo ngemiyalezo ethayiphiwe kanye/noma ikhamera yewebhu, futhi uma usho noma wenza into umlingani wakho angayithandi, bayayishiya ingxoxo ( "bulala"). ingxoxo).
Yakhiwa ngo-2022 ingane eneminyaka engu-17 ubudala eyaletha isayithi isuka ekamelweni layo yayisa emzini womzali wayo.Ngisho nangaphandle kwezikhangiso, le sayithi yakhula yaba nkulu kakhulu ngomlomo.Ngemva kweminyaka yokuzama ukwenza iphutha, ekugcineni usefinyelele izinga lapho engakwazi ukuhlunga ngendlela ephumelelayo ukuziphatha okungafanele.
Abasebenzisi kufanele babhalise futhi bavumelane nemigomo yesevisi, futhi abephula umthetho bazohlungwa omengameli besayithi. Iningi labasebenzisi lingaphansi kweminyaka engama-30 futhi kunabesilisa abaningi kunabesifazane. Okungenani ilinganiselwe ngo-R.
Imithetho Yokuhlangana Nezihambi Ku-inthanethi1. Ungenzi noma usho noma yini ongakhononda ngayo kamuva. Ingxoxo yakho, umbhalo, umsindo noma ividiyo ingaqoshwa kalula futhi isetshenziswe ngokumelene nawe.2. Uma uxhashazwa, kubike futhi ufake ohlwini oluvinjelwe umsebenzisi.Yenza okufanayo uma ubona umuntu ehlukunyezwa.3. Ungabelani ngolwazi lomuntu siqu nanoma ubani.4. Abakhwabanisi abangongoti bazoqola imininingwane yakho.5. Ungashiyi noma yini yomuntu siqu ohlakeni lwengxoxo yevidiyo, njengezithombe zomndeni nanoma yimiphi eminye imininingwane umhlali angayisebenzisa ukuze alandelele.6. Fundisa umndeni wakho ukuthi ungaphepha kanjani uma usebenzisa noma iyiphi yalezi zinsizakalo.Nakuba iningi lazo lilinganiselwe kakhulu, kusekhona ezinye izilwane ezizingelayo ezihlakaniphile laphaya.7. Zithokozise... yilokho okuyikho.